warkii.com » Kooxda Khaali peeli oo raali galin siiyay fanaanada caanka ah Beyonce’ Ishaan khater iyo Ananya Shaqo ee qabteen ayee kulaabanayaan!!
Kooxda Khaali peeli oo raali galin siiyay fanaanada caanka ah Beyonce’ Ishaan khater iyo Ananya Shaqo ee qabteen ayee kulaabanayaan!!
Toddobaad ka hor, kooxda khaali peeli Ishaan Khatter iyo Ananya Panday ayaa soo saaray heestii ugu horreysay ee filimka taasoo loogu magacdaray ‘Beyonce Sharma Jaayegi’. Si kastaba ha noqotee, heesta ayaa heshay jawaab celin Naceyb ama dislike taasoo loo sababeeyay erayo cunsuriyad ah oo kujiray heesta
kooxda filmka leh waxay beddeleen higgaadinta ereyada heesta Beyonse ka dib falcelintii naceybka aheyd ee kala kulmeen dadweynaha. kooxda filmka laba dhinac ayaa lagaheestay Magaca Beyonce ayaa ah magac qiimo kufadhiyo iyagoo wax Fasax ah uheesan ayee adeegsadeen iyo baraha bulshada oo heesta lagadiiday, waxaa la sheegay inay qorsheynayeen inay dib u qoraan heesta si looga fogaado inay saameyn ku yeelato sharciga filmka.
Si kastaba ha noqotee, hadda waxay umuuqdaan inay badaleen erayada heesta ‘Beyonce’. Maalmo ka dib, Director Maqbool Khan wuxuu ka hadlay tixraaca dhabta ah ee ereyga ‘Goriya’ ee heesta. “Marka hore, annaga oo aan ka labalabeynin ama aan cudurdaar lahayn waxaan rabnaa in aan raaligelin ka bixinno cid kasta oo ka xumaatay. Waxaan kuu xaqiijineynaa in heesta aana ugu talagalin cunsurinimo midib.
Run ahaantii, ereyga” goriya “ayaa marar badan oo dhaqan ahaan loo adeegsaday heesaha hindiga iyadoo amaan looga dhigayo gabdhaha ma aqaan sababtee xumaan unaqatay hadda ayuu yiri Directorka, sidoo kale, isbarbardhiga Beyonce waxaa loola jeedaa in uu yahay nin caqli badan oo kafarxinaya gabar isku dayaysa in ay ka dhaadhiciso in qoob ka ciyaarkeeda , astaanta heesta, quruxda, waxqabadka, qaabka iyo dabeecada. , “ayuu yiri.
Ma jirto sharaf dhac loogu talagalay – waxaan qadarinaynaa quruxda ay caanka ku tahay adduunka Beyoncé ujeedkeenan ma.ahan inaan ku dhaawacno mid ka mid ah taageerayaasheeda ” ‘Beyonse Sharma Jayegi’ waxaa sameeyay Musical duo Vishal – Shekhar waxayna heesta kujira 12 nooc oo qoob-ka-ciyaarka ah oo ay ka mid yihiin, Popping, Hip Hop, Ballet, House, Kalari, Kathak, Ring Dance, Fire Juggling, B-boying, Kalaripayattu , iyo qaar kaloo badan.
Dhanka kale, Filmka Khaali Peeli waxaa la sii dayn doonaa Zee Plex bisha October 2, 2020.